यता भूकम्पको पीडा, उता पोर्न भिडियोको चर्चा – YesKathmandu.com
सोमबार ११, जेठ २०७२
ब्लूफिल्म खेल्ने दौडमा अमेरिकालाई पच्छ्याउँदै ब्राजिल
ब्लुफिल्म खेल्ने र हेर्नेमा अमेरिकी नागरिक अगाडि भएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । तथ्यांकले पोर्नोग्राफीको नशामा फसेका ४२ प्रतिशत कलेजका विद्यार्थी रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै ५३ प्रतिशत १२ देखि १४ वर्ष उमेरका छन्। उनीहरू १२ वर्ष कटेपछि पोर्न फिल्मको लतमा फसेको तथ्यांकले देखाएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट पोर्न फिल्म हेर्ने सबैभन्दा बढी अमेरिकामा छन्। यहाँ चार करोड मानिस पोर्नको लतमा फसेका छन्। यो संख्याको एक तिहाई अर्थात् १ करोड ३० लाख महिला छन्।
अमेरिकालाई पोर्नुको राजा पनि भन्ने गरिन्छ। पोर्नसम्बन्धी फिल्म निर्माण, पोर्नस्टार, पोर्नसम्बन्धी वेबसाइट, वेबसाइट होस्टिङलगायत सबै काम अमेरिकामै बढी हुने गरेकाले अमेरिकालाई पोर्नको राजा भनिएको हो। विश्व बजारको ६६ प्रतिशत पोर्न फिल्म अमेरिकामा बन्ने गरेका छन्।
विश्वका ४५ करोड मानिस पोर्नोग्राफीको चक्करमा फसेका छन् । जिक्यू डटकमले जनाए अनुसार प्रत्येक पाँच जनामा एक जनाले दैनिक पोर्न ब्लू फिल्म हेर्ने गर्छन्। त्यस्तै ५९ प्रतिशतले हप्तामा पाँचदेखि १५ घण्टासम्म पोर्न फिल्म हेर्छन्। पोर्न मुभीको लतमा फसेका ५० प्रतिशतले भने सेक्सुको अनुभव नै बटुलेको देखिँदैन।
साइकोलोजी फ्याक्ट्सले हरेक ३९ मिनेटको अन्तरमा अमेरिकामा नयाँ ब्लू फिल्म बन्ने देखाएको छ। संसारभर पोर्नोग्राफीको वार्षिक १३ अर्ब डलरको कारोबार हँदै आएको छ। जसमध्ये अमेरिकामा मात्र ८९ प्रतिशत कारोबार हुन्छ। अमेरिकापछि यस्ता क्रियाकलाप ब्राजिलमा बढी हुन्छ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा पोर्न हेर्नेको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। ब्राजिलपछि दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान पोर्न फिल्म हेर्ने तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो।
संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र मानिएको चीन पोर्न हेर्ने चौथो ठूलो मुलुक हो। यहाँ कतिपय वेबसाइटहरू सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि लुकीछिपी पोर्न हेर्नेको जमात बढ्दै गएको छ।
विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसंख्या भारतमा भने पोर्नसम्बन्धी आँकडा मिश्रित छ। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार उच्च शिक्षा पढ्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू पोर्न फिल्म हेर्छन्। शहरिया क्षेत्रमा इन्टरनेट र दुर्गमका विद्यार्थीहरू साथीभाइसँग उपलब्ध पोर्न फिल्म ब्लुटुथको माध्यमबाट ट्रान्सफर गरेर हेर्छन्।
सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीशले आफ्नो मृत्यू फैसला लेख्दै आत्महत्या
‘अदालतबाट अर्कैका पतिसँग सम्बन्धबिच्छेद् !
One thought on “यता भूकम्पको पीडा, उता पोर्न भिडियोको चर्चा”
चलचित्रमा जम्न नसकेपछि अर्चना पनेरु डान्सबार धन्दातिर
बस कन्डक्टरदेखि सुपरस्टारसम्म
प्रिय साथीको निधनमा सलमान खान यसरी भक्कानिए
आफ्नै मतपत्र च्यातेर चुनाव हराउनेसँग अँगालो मारेर फोटो खिचे देवीले
कांग्रेसले टुङ्ग्यायो २२ नेताको चुनावी क्षेत्र – कहाँ कहाँ परे शीर्ष नेताहरु ?
एनसेल कर विवादमा ठूला करदाता कार्यालयको जवाफ सर्वोच्चले फैसला गरेको कि आदेश
प्रधानन्यायाधीश कार्कीद्वारा ११ न्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण
प्रतिष्ठानका एकसय १७ कर्मचारी तलब, भत्ताबाट वञ्चित
एमाले नेता नेपालद्वारा रौतहटबाट मतदान